November 17, 2020 - Online Hartha
အလျှံပါယ်ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ လက္ခဏာပိုင်ရှင်…
November 17, 2020 by Online Hartha
အလျှံပါယ်ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ၏ လက္ခဏာပုံ… မူရင်း လက်ဝါးပုံကိုပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါသည် ။လက်သူကြွယ် အောက် အဖြူရောင်ဖြင့် ဝိုင်းပြသည့်ထဲကြည့်ပါက “ငါးရုပ်သင်္ကေတပုံ´´ထင်ရှားပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ရမည်။ ငါးရုပ် သည် လက်ဝါးပြင် ၌ မည်သည့်နေရာ၌ ရှိရှိ ကောင်းကျိုး မင်္ဂလာ ကိုပေးသည်။ ယခုပုံ လက်သူကြွယ် အောက်ရှိ ငါးရုပ် သည် မှန်ဘီလူး ဖြင့်ကြည့်စရာမလိုပဲ ထင်ထင်ရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသား ပြထားသည်။ ကျွန်တော်မကြာခဏ တင်ပြခဲ့သည်မှာ…လက်သူကြွယ် အောက်ဂြိုလ်ခုံနေရာ၌ မည်သည့်အရေးကြောင်း- လမ်းကြောင်းလေးမှမရှိ ပြောင်နေသူ (သို့မဟုတ်)ပြားချပ်နိမ့်ဝင်နေသူ တို့သည် ဆင်းရဲသူ-ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိသူ-အခြေ ခံလူတန်းစားသာဖြစ်၏။ လူ့လောက၌…နေရာတစ်ခုခုဖြင့် အဆင်ပြေနေသူထိုက်သင့်သလောက် ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသူကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ချမ်းသာသေူကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အောင်မြင်နေသူတို့၏လက်သူကြွယ်အောက် ဂြိုလ်ခုံသည် မင်္ဂလာ အမှတ်အသား တစ်ခုခု မုချ ဧကံပါရှိနေသည်။ ဤကား…လက္ခဏာ ပညာ ဥပဒေဿ … Read more
ပါးစပျနာ၊ ပါးစောငျနာ ရောဂါ ဖွဈလာလြှငျ
လောကမှာ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သေခြင်းတရား ကို ဘယ်သူမှ မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူး။ ဆင်းရဲ ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းစတဲ့ လောကဓံ အနိမ့်အမြင့်တွေ ကိုလည်း ရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။ ဆင်းရဲခြင်း ဆိုတဲ့ နေရာမှာ စိတ် ဆင်းရဲတာ၊ ကိုယ် ဆင်းရဲ တာ နှစ်ခုလုံးပါတယ်။အာရုံငါးပါးခံစားနိုင်တဲ့ ခန္ဓကိုယ်ကြီး ကိုက ဝေဒနာ တွေခံ စားနိုင်တယ်။ ဖြစ်၊ တည်၊ ပျက်သဘောအရ ကိုယ်ဖြစ်မယ်၊ တည်ရှိမယ်၊ ပျက်စီးမယ် ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေဘဲ။ အဲ့ဒီလိုဘဲ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကလည်း နေရာတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ ပိုးမွှား တွေရန်က ရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှုရှိုက်နေတဲ့လေထဲမှာပါနေတဲ့ ပိုးမွှား တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်နေပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှသာ လက္ခဏာပြကြတယ်။ တော်တော်များများကို ခန္ဓာကိုယ် ကတိုက်ခိုက်ပြီး ဖြစ်နေတော့ဝင်မှန်းတောင်မသိလိုက်ကြဘူး။ နာတယ်၊ ကျင်တယ်၊ … Read more
ယနခေ့တျေ လူငယျလေးတှေ ကြား/မ မရှေး ပွီးဆုံးအောငျဖတျပေးကွစလေိုပါတယျနျော…
” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ ” …. ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီး တစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့ လအနည်းငယ်အကြာ……။ ဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး ” …. ဒီလိုပါပဲကွာ ” အဆင်ပြေပါတယ် ” ငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပ်ပြီးပြီလား ….. ” ဟာ ” မဖြစ်ရသေးပါဘူးကွာ ဒီတိုင်း ရိုးရိုးသားသားပဲချစ်ကြတာပါကွ..။ မင်းကလဲ ညံ့လိုက်တာကွာ ဒီခေတ်က ကိုယ်မစားရင် ” သူများစားတဲ့ခေတ်ကွ ” …. ” ဟင် ” ဟျောင့် ဘာဆိုင် လို့လဲကွ… ” အေးမှတ်ထား ” ဒီခေတ်က အပျိုရှားသွားပီ ကိုယ်မလုပ်လဲ ကိုယ်နဲ့ပြတ်ရင်လဲ နောက်တစ်ကောင်နဲ … Read more
သိုးစော်နံနေတဲ့ အဆီ တစ်ထပ် အသား တစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီး
ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ လက်တင်အမေရိက ကလေးငယ် ၃၅သန်းအတွက် ရှာကီရာဟာ သူမရဲ့လုံးဝန်းတဲ့ တင်ပါးအိအိတွေ ကို ဝှေ့ရမ်းလှုပ်ခါပြစ်လိုက်တယ်။ အင်ဂျလီနာဂျိုလီ လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီထဲက ပန်းနုရောင်ပေါင်တံတွေဟာအဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ အာဖရိက ဒုက္ခသည်တွေဆီ တဖွဲဖွဲဝင်လာမယ့် ရံပုံငွေ တွေပဲ။ ကဲ . . . ဘာထူးလို့လဲ ကျွန်မမောင်လေး နောက်နှစ်ကျောင်းဆက် ထားနိုင်ဖို့ သိုးစော်နံနေတဲ့ အဲ့ဒီအဆီ တစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးတွေကို ကျွန်မအခုနိုပ်ပေးနေရတယ်။ ကျွန်မအမေမြန်မြန်နေပြန်ကောင်းလာအောင်လို့ ကျွန်မစကပ်တွေ တဖြည်းဖြည်းတိုတိုလာရတယ်။ တစ်လ တစ်လ အလျှင်မီအောင် အိမ်စရိတ်ထောက်ဖို့အရေး ရှင့်ကိုအကြင်နာတွေပေးပေးနေရတယ်ကောင်း ရောင်းကောင်းဝယ် . . . ဟုတ်တယ်ဟုတ် . . ကျွန်မတို့ အထည်တွေ မချုပ်ကြတော့ဘူး။စက်ရုံတွေပိတ်သွားပြီ ကျွန်မတို့ပန်းရံလည်းမလုပ်နိုင်ကြဘူးလေ ခွန်အားနဲ့အတက်ပညာတွေ ဈေးပေါနေ တဲ့ ခေတ် … Read more
မိမိ ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်သူ မိန်းကလေးများအတွက် ဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ်…
ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်သူမိန်းကလေးများ ဘာဖြစ်တတ်သလ???ဲ(မိန်းကလေးများအတွက် ဖတ်ထားဖို့လိုပါသည်) ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်လိုက်သူ မိန်းကလေးအချို့ တိုးတက်လာသည့် နည်းပညာခေတ်တွင် ဂုဏ် သိက္ခာအရ အသုံးချခံခဲ့ရသော ဖြစ်စဉ်များ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာပါ သည်။ မိန်းကလေးငယ်အချို့ ချစ်သူအမျိုးသားအပေါ် ယုံကြည် မှုလွန်ကဲမိခြင်းနှင့် နည်းပညာကို တလွဲအသုံးချသော အမျိုးသား အချို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် သက် ဆိုင်သူနှစ်ဦးသာ သိထားသည့် လျှို့ဝှက်အပ်သော နေထိုင်မှုပုံစံ များသည် ….. Online စာမျက်နှာများ ပေါ်သို့ ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်သံဖိုင် များအဖြစ် ရောက်လာသည့် ဖြစ် စဉ်များရှိလာသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်များ၏နောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း၏ အထင်သေးရှုတ်ချမှုကို ရင်ဆိုင်ရပြီး …. သက်ဆိုင်သူမိန်းကလေး ငယ်အချို့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဦးတည်ချက်ပျောက်သွားသည့် … Read more
ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍ တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား ဖတျပါ…
ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍ တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ၂၀၂၀ ၊နိုဝင်ဘာလတွင်နေ့သားသမီးအသီးသီးအလိုက်ရတနာပုံကိန်းဆိုက်ချိန်မရှိသဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါနက္ခတ်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများထီကံစမ်းနိုင်သည်။အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ ၂၅. ၁၁.၂၀၂၀ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်၁၀နာရီမှနံနက်၁၀နာရီ၃၀မိနစ်အတွင်းထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ၂၉.၁၁.၂၀၂၀တနင်္ဂနွေနေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့)နေ့လည်၂နာရီ၅၀မိနစ်မှနေ့လည်၃နာရီ၁၅မိနစ်အတွင်းထီကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံများဖြင့်စတင်မှည့်ခေါ်သောမြို့၊ရွာ၊ဒေသများမှလည်းထီဆုကြီးဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ဇာတာခွင်ပါထီပေါက်ကံအားနက္ခတ်ဥယျာဉ်တွင်ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီးဆန်းစစ်နိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါသည်ဦးဇေယျာကို(နက္ခတ်ဥယျာဉ်)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉ Unicode Version ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍ တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား ထီပေါကျကိနျးရှိသညျ ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားထီပေါကျကိနျးရှိသညျ ၂၀၂၀ ၊နိုဝငျဘာလတှငျနသေ့ားသမီးအသီးသီးအလိုကျရတနာပုံကိနျးဆိုကျခြိနျမရှိသဖွငျ့အောကျဖျောပွပါနက်ခတျမြားဖွငျ့ တိုကျဆိုငျသညျ့ဗုဒ်ဓဟူးနှငျ့တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားထီကံစမျးနိုငျသညျ။အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဖွငျ့ဗုဒ်ဓဟူးနသေ့ားသမီးမြား ၂၅. ၁၁.၂၀၂ဝဗုဒ်ဓဟူးနနေံ့နကျ၁ဝနာရီမှနံနကျ၁ဝနာရီ၃ဝမိနဈအတှငျးထီးဖွူနက်ခတျကိနျးဖွငျ့တနင်ျဂနှသေားသမီးမြား ၂၉.၁၁.၂၀၂ဝတနင်ျဂနှနေေ့ (တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့နေ့)နလေ့ညျ၂နာရီ၅ဝမိနဈမှနလေ့ညျ၃နာရီ၁၅မိနဈအတှငျးထီကံစမျးနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။ တနင်ျဂနှေ၊ဗုဒ်ဓဟူးနနေံ့မြားဖွငျ့စတငျမှညျ့ချေါသောမွို့၊ရှာ၊ဒသေမြားမှလညျးထီဆုကွီးဆှတျခူးနိုငျပါသညျ။ မိမိတို့၏ဇာတာခှငျပါထီပေါကျကံအားနက်ခတျဥယြာဉျတှငျကသြငျ့ငှပေေးသှငျးပွီးဆနျးစဈနိုငျပါကွောငျး လေးစားစှာဖွငျ့အသိပေးအပျပါသညျဦးဇယြောကို(နက်ခတျဥယြာဉျ)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉
လကျဖဝါးမှာ M ပုံသဏ်ဍာနျ ပါသူတှရေဲ့ သူမြားနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် ပါသူတွေရဲ့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက်များ လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် . . .ဘာလို့လဲဆိုတော့ No Commentson လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် . . .ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ဖဝါးရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ မိမိချစ်ရသူတစ်ယောက်က လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာ ရှိပါက အချက်တစ်ချက်ကို … Read more
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညအတွက် အကျိုးပေးမြန်သော ပံ့သကူ ပစ်နည်း
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညအတွက် အကျိုးပေးမြန်သော ပံ့သကူ… တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည ၁၂ နာရီမှာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်သည့် ပမာဏလေးကို စေတနာ များစွာဖြင့် ပံ့သကူပစ်ပါ။ ရရှိလာမည့်အကျိုးကို မမျှော်ကိုးပဲ ပစ်ပါ။ နောင်ဘဝရမည့်ကုသိုလ်၊ ယခုရမည့် ကုသိုလ် အသာထား ကြပ်တည်းနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ပံ့သကူလေးကြောင့် ရတဲ့သူပျော်သွားရင် ကိုယ်ပီတိဖြစ်ရတာက ချက်ခြင်းလက်ငင်းရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါ။ ငွေ ဖြစ်စေ၊ ဆန်အိပ်သေးသေးလေးဖြစ်စေ ပံ့သကူပစ်ပါသည်လို့ စာလေးရေးပြီး ပံ့သကူပစ်နိုင်ပါတယ်။ ရတဲ့သူလည်း လွတ်လွပ်စွာ ပျော်ရ ကိုယ်သည်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမရှိပဲ ဖြူစင်စွာလှူရလို့ ဘယ်လောက် ပီတိဖြစ်ရသလဲဗျာ။ ကိုယ်လှူမယ့် ပစ္စည်းကို ၁။ အိတ်နဲ့ ထည့်မည်ဆိုလျှင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အကြည်သုံးပါ။ (ဥပမာ။။ ဆန်တို့ သကြားတို့ ဆပ်ပြာမှုန့် စသဖြင့်) ၂။ ပိုက်ဆံဆိုလျှင်တော့ … Read more
ဓာတုပစ်စညျးတှမေသုံးဘဲ သဘာဝ ရှားစောငျးလကျပတျနှငျ့တှဲဖကျပွီး အသားဖွူအောငျပွုလုပျနညျးမြား
ဓာတုပစ္စည်းတွေမသုံးဘဲ သဘာဝ ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့် အသားဖြူအောင်လုပ်နည်း ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး အ သားဖြူအောင် လုပ်မှာ ထက်စာရင်တော့ သဘာဝနည်း ကို သုံးပြီး ကြိုးစားကြ ည့်တာက ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်း ကလည်း တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါ။ ရှားစောင်းလက် ပတ်ကို အသား ဖြူဖို့အတွက် ဘယ်လို မျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ (၁)ရှားစောင်းလက်ပတ်တစ်မျိုးတည်းကို သုံးပြီး ဖြူအောင် လုပ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲပါ။ပြီးရင် ဂျဲလ်ကို ထုတ်ပြီး ဇွန်း(သို့) ခရင်းနဲ့ ခြစ်ထုတ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာမှာ လူးပေးပြီး(၁၀)မိနစ်ကြာအောင် ထားပေး ပါ။(၁၀)မိနစ်လောက် ပြည့်ရင်တော့ ရေအေးနဲ့ဆေးချပါ။ ဒီနည်းကို တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်လောက်၊အချိန် မရဘူးဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမ်ေ လာက်တော့ လုပ်ပေးပါ။ … Read more
အနာရှိလျှင်​ အရက်ပျံ ထိတော့ စပ်ကြမှာပဲ…​ယောက်ျားယုတ်​နဲ့ မိန်းမ​ကောင်းများ အတွက်သာ…
သင့်ဇနီး ဆိုတာ… သင့် ဇနီး​နေရာမှာ သင့် အ​မေ၊သင့် အမ ၊သင့် နှမသာဆိုလျှင်​ဘယ်​လို​နေမလဲ? သူသည်​လည်းပဲ မိန်းမ ထဲကမိန်းမ တစ်​​ယောက်ပါ ။ အ​သွေးနဲ့အသားနဲ့တည်​​ဆောက်​ထားတဲ့လူပါ ။ သက်​မဲ့ အရုပ်တစ်ရုပ်​ မဟုတ်ပါ… သင့် အမေဖြစ်​တဲ့ မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာကြည့်​ပါ။ သင့် နှမဖြစ်​တဲ့ နှမချင်းကိုယ်​ချင်း​စာကြည့်​ပါ။ စိတ်​တိုုလျှင်​ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတစ်​ခုနဲ့ သွယ်ဝိုက်​မပြောနဲ့ …. သင်​​တောင်​မှ သင့်​အသားထိလျှင်​ နာတက်​​သေးတာပဲ… ဝဋ်​ဆိုတာ မလည်​ဘူးမထင်​နဲ့ ….ခံရတဲ့အခါ ပြုံးနိုင်​ကြိုးစားပါ။ တချိန်​မှာ သင့်​ညီမဟာလည်း သူများရဲ့ သားမယားဖြစ်​နိုင်​သလို၊ သင့်​သမီးကလည်း​ သူများသားမယားဖြစ်​နိုင်​တယ်​။ လူစိတ်​ရှိတဲ့​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​၊ လူလိုသိတက်​တဲ့ခင်​ပွန်း​ကောင်းတစ်​​ယောက်​က အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်​​ယောက်​၊ အားနွဲ့တဲ့ ဇနီးတစ်​​ယောက်​အ​ပေါ် ဘယ့်​​တော့​မှ ကိုယ်​ထိလက်​​ရောက်​ မ​စော်​ကားဘူး၊ အနိုင်​မကျင့်​ဘူး… အဲ့ဒီလို လုပ်​ရပ်မျိုးကို … Read more